Sosialy Archives - Page 2 sur 154 -
Taom-baovao 2019 : Ho tsara ny andro eto afovoantany
31/12/2018 admintriatra 0
Hihena ny habetsaky ny rotsak’orana amin’izao faran’ny taona izao sy rahampitso taom-baovao amin’ny faritra maro manerana ny Nosy. Araka ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro dia tsy hisy ny orana ato anatin’ny …Tohiny
Fetin’ny faran’ ny taona : Tapaka lava ny Jiro sy Rano
29/12/2018 admintriatra 0
Tefa efa tsy rariny intsony ny ampihainan’ny JIRAMA ny vahoaka, amin’ izao akatoky ny fety izao satria maty lava ny jiro moa maty lava ihany koa ny rano. Angamba tsy azaivaina amin’ ity orinasam-panjakana ity …Tohiny
Sendikàn’ny Jirama (SEMM) : Manohitra ny fandroahana mpiasa
28/12/2018 admintriatra 0
Nanao fanambarana ny teo anivon’ny sendikàn’ny mpiasan’ny Jirama na ny SEMM, omaly, manoloana ny zava-mitranga eo anivon’ny orinasa nasionaly mpamokatra herinaratra. Nambaran’izy ireo tamin’izany fa tsy azo ekena ny fandroahana mpiasa tsy ara-drariny eo anivon’ny …Tohiny
Mbola mirongatra ny kitrotro : Miisa 15 049 ireo voany
27/12/2018 admintriatra 0
Mbola tsy voafehy ny aretina kitrotro eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Manaporofo izany ny fitomboan’ny olona voany sy ny distrika ahitana izany. Tsy ny ankizy, tsy ny lehibe voany avokoa. Na eny amin’ny tobim-pahasalamana lehibe …Tohiny
« Amboarina indray ny lalantsika ». Io ny fanomezan-tokin’ny kandidà ho Filoham-pirenena laharana faha-25 amin’ny bileta tokana, Marc Ravalomanana. Raha ny fanazavan’ity kandidà avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara ity, efa ao anatin’ny fampielezan-kevitra tanteraka ...Tohiny